Hamarino ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana miaraka amin'ny fitsipi-pitenenana | Martech Zone
Alakamisy Oktobra Oktobra 8, 2020 Alahady, Martsa 7, 2021 Douglas Karr
Raha efa mpamaky ny Martech Zone mandritra ny fotoana kelikely, fantatrao fa afaka mampiasa fanampiana kely aho ao amin'ny departemanta fanontana. Tsy ny tsy firaharahiako ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana no ataoko. Ny olana dia mazàna matetika. Nandritra ny taona maro dia nanoratra sy namoaka ny lahatsoratray tamin'ny sidina aho. Tsy mandalo dingana maro amin'ny fankatoavana izy ireo - karohina, voasoratra ary navoaka izy ireo.
Mampalahelo fa niteraka henatra tamiko izany rehefa namoaka zavatra mahatsikaiky aho hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana nandritra ny taona maro. Izaho koa efa niresaka tamin'ny sasany tamin'ireo mpanoratra an-tsoratra momba ny fananana azy ireo hitazona ny lahatsoratro isan'andro. Na izany aza tsy te-hiandry ny hamoahana aho ka nahemoko. Tsy lazaina intsony ny zava-misy fa mety tsy tiako ny fanovan'ny tolo-kevitr'izy ireo ny feon'ny asako. Tsy nety nandeha tamin'ny làlan'ny fanovana aho. Ary koa, manoratra lahatsoratra be dia be aho izay mila manatsara ny fahaizako miteny anglisy.
Firy ny lesoka amin'ny fitsipi-pitenenana sy tsipelina ataon'ny olona an-tserasera?
Tsy izaho irery! Grammarly nandinika teny iray tapitrisa mahery proofread amin'ny alàlan'ny fampiharana fanoratana malaza ataon'izy ireo mandritra ny iray volana. Ity no hitan'izy ireo:
Ny olona dia nanao hadisoana 39 isaky ny 100 teny amin'ny lahatsoratra media sosialy. Manaraka ny mailaka miaraka amina hadisoana 13 isaky ny teny 100 ary ny hafatra bilaogy no ambany indrindra miaraka amin'ny lesoka 6.5 ​​isaky ny 100 teny.
Intelo ny olona mety manao fahadisoana amin'ireo lahatsoratra media sosialy noho isika amin'ny karazan-tsoratra an-tserasera hafa. Ataoko fa misy ifandraisany amin'ny fetran'ny Twitter (tsy misy fanovana) sy ny toetoetran'ny resaka media sosialy ny sasany amin'izany.
Ny vorona voalohany nanoratra teo anelanelan'ny 4:00 maraina ka hatramin'ny 8:00 maraina dia nanao fahadisoana 18.2% kely kokoa noho ny vorondolo alina manoratra eo anelanelan'ny 10:00 alina sy 2:00 maraina. (Uh-oh)
Inona avy ireo lesoka farany amin'ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina ataon'ny olona an-tserasera?
Fahadisoana Apostrophe (oh: ndeha vs. mamela)
isan'andro vs. Isan'andro
Ery vs. ny
Than vs. dia
Mety hahita fanatsarana vitsivitsy ianao amin'ity lafiny ity, rehefa nanambola fahazoan-dàlana isan-taona aho Grammarly, serivisy izay matetika nantsoina hoe mpandinika fitsipi-pitenenana tsara indrindra manerantany. Vita amin'ny fanitarana browser, afaka manoratra haingana sy manitsy lesoka aho nefa tsy miala amin'ny tonian-dahatsoratra.
Fitsipi-pitenenana: Ny sehatra fitsipi-pitenenana sy tsipelina tsara indrindra
Grammarly dia serivisy azoko ampiasaina amin'ny sehatra na rindrambaiko rehetra. Ireto misy ohatra:
Tonian-dahatsoratra - Mahafinaritra ny tonian-dahatsoratr'i Grammarly, miaraka amin'ny fanamarihana ny tsipelina, ny fitsipi-pitenenana, ny fanamarihana ny plagiarism, ny tolo-kevitry ny mpihaino, ny fanaraha-maso ny fombafomba, ny famakiana, ny fahitana ny feo, ny fikasana, ny isa ankapobeny, ny tanjona, ny tolo-kevitra momba ny teny, ny fanoloana kanto, ny isa amin'ny teny, ny fehezanteny ary maro hafa.
App Desktop amin'ny fitsipi-pitenenana - Grammarly dia manana rindrambaiko irery izay afaka mandeha amin'ny rafitra fiasa rehetra. Sehatra mifototra amin'ny tranokala izy io ahafahanao mitazona fitoeram-bokin'ny rakitrao rehetra.
Grammarly ho an'ny iPad - Grammarly dia manana rindrambaiko irery izay afaka mandeha amin'ny iPad.
Fanitarana Browser Grammarly - Grammarly dia manana fanitarana finday mahafinaritra. Mampiasa ny fanitarana Safari aho izao ao anatin'ny WordPress 'Gutenberg editor ato amin'ity lahatsoratra ity izao. Izay pejin-tranonkala misy sahan-dahatsoratra dia mamela ny Grammarly hanampy anao. Ary ny tsara indrindra dia afaka mahazo ny fampiasa fototra ianao nefa tsy andoavam-bola!
Fanampin'ny birao amin'ny fitsipi-pitenenana - Grammarly dia manana birao add-in ho an'ny Windows na Mac.
Kitendry fitsipi-pitenenana - Raha mampiasa finday ianao dia azonao atao ny mametraka sy mampiasa ny Grammarly Keyboard mba hanampiana ny kopian'ny findainao.
Orinasa manao fitsipi-pitenenana - Manana torolàlana tena manokana ve ny orinasanao rehefa manoratra? Ny Business Grammarly dia ahafahanao mitarika ny olona rehetra ao amin'ny orinasa hanaraka ny torolàlanao.
Atombohy amin'ny Grammarly maimaim-poana
Ahoana ny fomba hijerena ireo lesoka amin'ny fitsipi-pitenenana sy tsipelina miaraka amin'ny fitsipi-pitenenana
Ny fampiasana Grammarly dia tsotra. Ao amin'ny faritra an-tsoratra iasanao, ho hitanao ny olana amin'ny tsipelina sy ny fitsipi-pitenenana voatsipika. Kitiho ny kisary Grammarly ary miakatra mipoitra tonian-dahatsoratra lalindalina kokoa izay manana ny fampahalalana rehetra ilainao hanatsarana ny kopianao.
Ity misy horonantsary tsara momba ny fomba fiasa Grammarly:
Raha tsy ampy ny endri-javatra ho anao, ahoana ny amin'ny mailaka isan-kerinandro hampahafantarana anao ny fahaizanao manatanteraka amin'ny mpampiasa Grammarly hafa? Eny, mandefa iray izy ireo! Ary tsia, tsy mizara ny ahy aho.
Fanamarihana: Mampiasa ny Grammarly rohy mpiara-miasa ao amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: tolo-kevitry ny mpihainolesoka amin'ny tsipelina manodidinafanovana fitaovanafitaovana fanontanalesoka isaky ny teny 100fanamarinana ara-dalànatanjonafitsipi-pitenenanafampiharana fitsipi-pitenenanafitsipi-pitenenanampandinika fitsipi-pitenenanafitsipi-pitenenanafitaovana fitsipi-pitenenanagrammarlyfiniavanatsipelina disoisa ankapobenyfanamarinana plagiarismmari-piatoanamora vakianatsipelina-taratasim-bolatsipelinatsipelinafampiharana tsipelinampanamarina tsipelinafitaovana tsipelinafahitana feoVoambolanaisaina ny tenylesoka tenytolo-kevitra momba ny teny
Jornaya Activate: Fanaraha-maso eny an-tsena sy fijerena ny fitondran-tena amin'ny fividianana fiainana lehibe
Mar 24, 2016 ao amin'ny 4: PM PM
Andramo izao. Misy endri-javatra milaza azy tsy hiraharaha ireo tarehin-tsoratra html amin'ny doka iray? Amin'izao fotoana izao, rehefa manoratra ho an'ny tranonkala aho dia manao format fotsiny rehefa mandeha aho ary ny fitsipi-pitenenana havanana dia mifanentana, indrindra rehefa tonga amin'ny lisitra.
Ary, grr, rahoviana no hanohana ny Google Drive?
Raha tsy izany dia mahafinaritra.
Mar 25, 2016 ao amin'ny 5: PM PM
Google Drive dia mety ho endri-javatra mahafinaritra! Avoakako avy ao amin'ny Grammarly ao anatin'ny antontan-taratasiko.